Precision vs Kurangarira- Kuratidzira Kururamisa Paradox muMuchina Kudzidza - NewGenApps
chakagadzirwa Intelligence, Dhata Sayenzi, Machine Learning, Kufanotaura Ongororo, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Machine pakudzidza (ML) ndeimwe munda wakadai we data science uye chakagadzirwa njere iyo yakawana ruzha rukuru mu bhizimisi vemunharaunda. Developers uye vaongorori vari kuuya nema algorithms matsva uye mazano mazuva ese. Aya matekinoroji eML atovewo emhando yepamusoro uye ane hunyanzvi maererano nekutora ruzivo. Machine kudzidza mafomu anotangira kubva rwezvemabhengi to nezveutano to Marketing. Nehurombo, hatina kusvika padanho re chakagadzirwa njere kwatinogona kutaura kuti algorithms edu ane zana muzana akarurama. Machine kudzidza inogoneswa Makomputa haana kungwara sevanhu uye tinoda kuomarara kukodha kuti vagone kuratidza imwe nhanho yehungwaru. Izvo zvakati, makambani anotyairwa nedatha ari kushanda nesimba kuti awane akanakisa kubva kune avo algorithms nekuvavarira kune akakodzera mhedzisiro neiyo yepamusoro chaiyo inogoneka. Asi kunyatsoita zvese ndizvo zvaunofanira kunge uchivavarira kana ingori fashoni? Ngatitarisei pamuenzaniso kuti tinzwisise izvi:
Mamwe mazwi akajairwa aunoda kuziva:
Usati wapinda mukati meruzivo rwe muchina kudzidza algorithms zvakakosha kuti iwe unzwisise izvo zvekutanga uye zvakajairwa mazwi ayo anoshandiswa mune ino blog. Pakutanga, iwe unganzwa uchinetseka neruzivo asi ziva kuti haruna kuomarara sekutaridzika kwaungaita. Mhedzisiro kubva kune chero chikamu chealgorithm inogona kuiswa seinotevera:
Makirasi - Chairo kirasi ndiyo chaiyo inoburitsa yakatarwa nepo yakafanotaurwa kirasi seti yezvibodzwa zvinopihwa ne Machine kudzidza algorithms. Semuenzaniso, iyo chaiyo kirasi inogona kuve iyo data yemvura chaiyo inonaya mumwaka nepo fungidziro kirasi inogona kuve iyo data yemvura inotarisirwa mumwaka.
Chokwadi Positives (TP) - Huwandu hwechokwadi hunobatsira hunoreva izvo zvakafanotaurwa zvakanaka hunhu kureva kuti kukosha kweese ari maviri mukirasi uye akafanofungidzirwa kirasi ndihe. Eg kana iyo chaiyo kirasi kukosha inoratidza kuti kwakanaya uye kwakafanotaurwa kirasi inoratidza chinhu chimwe chete ichocho.
Chokwadi Negatives (TN) - Aya ndiwo matanho akanyatsofanotaurwa asina kunaka kureva kukosha kwezvose zviri zviviri kirasi uye yakafungidzirwa kirasi kwete. Evha kana chaiyo kirasi ikati haina kunaya uye yakafanofungidzirwa kirasi inoratidza chinhu chimwe chete ichocho.
Nzvimbo Dzenhema (FP) - Iyo inoratidza kukosha uko iko chaiko kirasi iri kwete asi iyo yakafanotaurwa kirasi ndi hongu. Semuenzaniso kana kirasi chaiyo ikati haina kunaya asi yakafanofungidzirwa kirasi yakaratidza kuti kwaizonaya.
Nhema Mhedzisiro (FN) - Iyo inoratidza kukosha uko iko chaiko kirasi iri hongu asi yakafanotaurwa kirasi mune kwete. Semuenzaniso kana kirasi chaiyo ikati kwakanaya asi vakafanotaura kirasi yakaratidza kuti hakuzove nemvura.
Kuvhiringidzika Matrix - Iyo matrix yekuvhiringidzika itafura iyo inowanzo shandiswa kutsanangura mashandiro eiyo classification modhi (kana "classifier") pane seti yeyedzo data iyo iyo yechokwadi tsika inozivikanwa.
Harmonic Zvinoreva Precision uye Yeuka - Iyo F1 mamaki ndiyo harmonic zvinoreva yeiyo chaiyo uye kurangarira. Iyo yepamusoro-soro kukosha kweF1 ndeye 1, inoratidza kunyatsoita uye kurangarira, uye yakaderera kukosha kukosha ndeye 0, kana iri iyo chaiyo kana kurangarira kuri zero.
Nzvimbo iri pasi peiyo ROC Curve (AUC) - Nzvimbo iri pasi peROC curve (AUC) chiyero chekuti paramende inogona kusiyanisa pakati pemapoka maviri ekuongorora (akarwara / akajairwa)
Kutaura - Icho chiyero chekubudirira kweiyo Machine kudzidza muenzaniso.
Kururama = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)
Read More: Uchishandisa Muchina Kudzidza Kufanoona Mafungiro
Kuchera Pasi iyo Yakarurama Metric:
Pano isu tichaongorora yekumisikidza modhi kuti unzwisise kunyatso. Iti isu tine classifier yekuziva spams uye inoratidza zvinotevera mhedzisiro:
Yakarongedzwa Yakanaka Yakarongerwa Negative
Chaizvoizvo Chakanaka 10 (TP) 15 (FN)
Chaizvo Negative 25 (FP) 100 (TN)
Mune ino kesi, kurongeka = (10 + 100) / (10 + 100 + 25 + 15) = 73.3%. Inoita kunge yakanaka algorithm. Zvino ngatione zvinoitika kana tikachinjisa iyo mbeveve classifier iyo inomaka zvese se "hapana spam":
Chaizvoizvo Chakanaka 0 (TP) 25 (FN)
Chaizvo Negative 0 (FP) 125 (TN)
Ikozvino kururamisa = (0 + 125) / (0 + 125 + 0 + 25) = 83.3%. Waona zvaitika? Kunyangwe isu takatamira kune mbeveve classifier, iine chaiyo zero yekufungidzira simba, zvakadaro, isu takaona kuwedzera kwekururama. Izvi zvinonzi kunyatsojeka kunopesana.
Muchiitiko apo TP <FP, ipapo kurongeka kunogara kuchiwedzera kana tichifambisa mutemo wekupatsanura uyo unogara uchipa "zvakaipa" kuburitsa. Saizvozvowo, mune iyo kesi iyo TN <FN, zvakafanana zvichaitika kana tichienda kune mutemo unogara uchipa "zvakanaka" kuburitsa. Neraki, pane nzira yekugadzirisa iyi nyaya. Pano panouya kunyatso, kurangarira, uye F1 kununura:
Chii chinonzi Precision, Yeuka uye F1 Chikamu?
Precision chiyero cheyakafanotaurwa zvakanaka hunhu kune hwese hwakafungidzirwa hunhu. Iyi metric inosimbisa chaiyo chaiyo fungidziro kubva pane ese akanaka fungidziro. Yakakwira chaiyo inoratidza yakaderera nhema nhema chiyero.
Yeuka = ​​TP / TP + FN
Iyo yekuyeuka ndiyo chiyero cheyakafanotaurwa nenzira kwayo hunhu kune chaiwo chaiwoiwo maitiro. Rangarira inosimbisa kunzwisiswa kwealgorithm kureva kuti kubva pane ese chaiwo positives vangani vakabatwa nechirongwa. Kurangarira kwakakwirira kunoreva kuti algorithm inodzosera yakawanda yemhedzisiro inoenderana (ingave kana isiri iyo isingadzoreke zvakare
F1 Chikamu = 2 * (Yeuka * Precision) / (Yeuka + Zvakarurama)
Icho chiyero chakayerwa chePaccision uye Yeuka. Pakutanga kuona, F1 inogona kuoneka yakaoma. Iyo yakaomesesa metric pane kunyatso nekuti inotora ese maviri manyepo enhema uye zvisirizvo zvisiri izvo mukufunga. Kururamisa kwakakodzera chete kana zvese zviri zviviri manyepo uye zvisizvo zvenhema zvine mutengo wakafanana (izvo zvisingaite). Precision, Recall, uye F1 Score inopa imwe yakakodzera nzira kune yechinyakare kurongeka metric uye inopa yakadzama nzwisiso nezve algorithm iri pasi pekuongororwa.
Read More: 5 Mashini Kudzidza Maitiro Ekutevera
Precision vs Yeuka - Nguva Yekuita Bhizinesi Sarudzo:
Chinangwa chakafanana chese bhizimisi Executive ingave yekuwedzera zvese nemazvo uye kurangarira uye kuti munzira dzese zvine musoro. Asi Machine kudzidza matekinoroji haana kuomarara sezvaanotarisirwa kunge ari. Chero algorithm inogona kugadzirwa kuti itarise pane imwe metric kupfuura imwe. Inga algorithm yako inogona kuve nehanya kana inogona kuve chaiyo. Kukosha kwemetric kunoenderana nezvako bhizimisi chinangwa.
Semuenzaniso, kana paine algorithm ye kubiridzira kuona rangarira ndiyo metric yakakosha. Zviri pachena kuti kubata chero hunyengeri hunogona kunyangwe hazvo zvichireva kuti zviremera zvingangoda kupfuura nepasipo. Kune rimwe divi, kana iyo algorithm yakagadzirirwa iyo manzwiro ongororo uye zvese zvaunoda izano repamusoro-soro remanzwiro akaratidzirwa muma tweets uye nekuvavarira kunyatsoita ndiyo nzira yekuenda.
Chinangwa chekupedzisira ndechekusvika iyo yepamusoro F1 mamakisi asi isu tinowanzo kusvika padanho kubva kwatisingakwanise kuenda mberi. Pese paunofunga kugadzira a Machine kudzidza algorithm chengetedza zvaunokoshesa zvakatsanangurwa kubva pakutanga. Ndinovimba, gwara redu pane chaiyo vs kuyeuka kwaizokubatsira kutsanangura zvaunovavarira.
At NewGenApps isu tinonyanya kugadzira Machine Learning maapplication angave ari panharembozha kana pawebhu. Kana iwe uine chirongwa chakadai saka sununguka kubata.